Ahoana no ahafahako manao SEO ho an'ny sokajy ao anaty bilaogy?
Ny tompon'ny tranokala dia mamorona bolongana mba hanatsara ny lozam-pifaneraseran'ny vohikala ary hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranokalany. Raha mamorona blôgy ianao dia tianareo ny mpanjifa mety hahita izany ary tonga eo amin'ny toerana misy anao. Ankoatr'izay, mety ho tianao ihany koa ny tranonkalan'ny mpitsidika anao mba hahafahana mamantatra ireo lahatsoratra vao nivoaka anao ao amin'ny blôginao. Misy ny fahafahana manova ny mpitsidika vaovao ho mpamaky ny bilaoginao. Ny votoaty izay noforoninao tamin'ny faharetana sy ny fikarakarana dia tsy tokony hafenina ao amin'ny blôginao raha vao vakina avy amin'ny mpihaino anao - how to build dual coil atomizer. Ny votoatin'ny lahatsoratra vao haingana dia afaka manampy ny mpanjifanao sy ny mpamaky ihany koa. Izany no tokony havelany ho velona foana sy ho hitan'ny rehetra. Raha manao izany ianao dia mila mizara ny blôginao amin'ny sokajy tsara. Hanampy ny mpamaky anao sy hitady botsika hanadihady ny votoatin'ny tranonkala rehetra ary hanatsara ny laharan'ny bilaoginao ao amin'ny Google. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hahita fanazavana saro-takarina ianao amin'ny fomba hizarana ny blôginao mba hanamora ny fiantraikany ao amin'ny Google.
Rehefa tsy misy sokajy
Maro ireo mpitoraka blaogy izay mamorona hatrany ny votoaty vaovao, mametraka ao anaty lavaka ilay tranokala taloha. Etsy an-daniny, marina izy ireo satria manome fampahalalana tsy manam-paharoa sy manan-danja ao amin'ny tranokalany izy ireo. Etsy ankilany, tsy manome fotoana ho an'ny mpamaky ny blaoginao vaovao ianao mba hahitàna ireo zava-misy marina avy amin'ny votoatinao vao nivoaka. Ireo lahatsoratrao dia toa nosoratana mba hovakiana indray mandeha monja. Raha tsy manana marika sy rohy avy amin'ny lahatsoratra iray ianao dia lasa very ny fifamoivoizanao. Ankoatra izany, miharatsy ny mpiserasera traikefa amin'ny blôginao, ka mahatonga azy ireo hamakivaky ny arisiva. Asehony amin'ny mpampiasa fa tsy ilaina ny votoaty taloha ho vakiana sy amin'ny fikarohana bots fa tsy misy dikany ny manadihady azy intsony.
Hanatsara ny blôginao ho azo ampiasaina amin'ny famoronana sokajy votoaty
Mba hanatsarana ny fitadiavam-bolana fikarohana azonao, dia azaho antoka fa afaka mivezivezy mora foana ny mpitsidika amin'ny alalan'ny sokajy sy ny pejin'ny blôginao ary afaka mahita izay ilainy mandritra ny minitra. Ny mpamaky vaovao mpamaky anao dia tokony hanana lisitry ny lahatsoratra misy ao amin'ny tranokalanao miaraka amin'ireo soso-kevitra hafa izay zavatra hafa azon'izy ireo vakiana mifandraika amin'ny lohahevitra manokana. Ankoatra izany, ny ambaratongam-pitaterana ao amin'ny blôginao, dia hanome fahafahana ireo mpamaky tsy tapaka hamerina hamerina mamoaka votoatin-java-po taloha ary ohatra raha hampitaha azy amin'ny vaovao.
Ny fijerin'ny blaogin'ny blaoginao SEO
Ny bilaogy fanta-daza dia mahasoa ihany koa ho an'ny fanatsarana ny fikarohana. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny mpitoraka blaogy dia miresaka lohahevitra mitovy amin'ny lahatsoratra samy hafa. Raha manao izany izy ireo dia mikendry ireo teny fikarohana mitovy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny mpitoraka blaogy dia afaka mifaninana amin'ny votoatiny manokana ho an'ny toerana ambony kokoa ao amin'ny Google. Tsy mampisy vidiny ho an'ny bilaogy avy amin'ny sisin'ny fitadiavana fikarohana. Raha mamorona pejy momba ny sokajy ianao ary mampifandray ireo lahatsoratra mifandraika amin'ny lohahevitra rehetra ao amin'io sokajy io ihany, dia ahafahan'ity sokajy blaogy ity hahazoana traiketam-piofanana misimisy kokoa amin'ny karoka fitadiavana.